အော်တိုအာမခံ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါ 1 တစ်လအပေါ်တစ်ဦး CTP စေနိုင်သလား? ငါ့ကိုပြောပြပါဒါမှမဟုတ်နိမ့်ဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးပြု.
1 လအတွက် CTP လုပ်လို့ရလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါသို့မဟုတ်အတိုဆုံးကာလ။ အနည်းဆုံးကာလ - အကူးအပြောင်းအာမခံအတွက် 20 ရက်အထိ (နှစ်စဉ်ပေါ်လစီ၏ကုန်ကျစရိတ်၏ 20% ကုန်ကျသည်) ။ သာ ...
လယ်ထွန်စက်နှင့်အခြား။ / စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းများအတွက် CTP စေရန်လိုအပ်ပါသလား?
လယ်ထွန်စက်နှင့်အခြား။ / စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းများအတွက် CTP စေရန်လိုအပ်ပါသလား? ကျိန်းသေပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သောဟုတ်ကဲ့မသင်မနေရအာမခံ။ အဆိုပါ CTP မရှိရင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာအတွက်အကောင့်ပေါ်တွင်တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။3လကြာအာမခံ Make ...
အာမခံကုမ္ပဏီမှစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြဘို့ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုအခါ CTP အပေါ်ထိခိုက်မှုကဘာလဲ?
OSAGO ပျက်စီးမှုရှိပါကအာမခံကုမ္ပဏီသို့စာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းရန်နောက်ဆုံးရက်မှာအဘယ်နည်း။ စာချုပ်ကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်ဖတ်ပါ။5ရက်များအဖြစ်ကျွန်ုပ်မှတ်မိသမျှအတိုင်းဖတ်ပါ - မတော်တဆမှုဖြစ်ချိန်မှ စ၍ 15 အလုပ်လုပ်ရက်များ၊
CTP အစစ်အမှန်များအတွက်ပိုက်ဆံပြန်သွား? သင်ရုံခေါင်းကိုပျံဝဲ ... ငွေကိုပြန်လာချင်ကြဘူး !! ! ကျနော်တို့ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝယ်ယူ၏အချိန်သို့ပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။ လုံလောက်အောင်အကောင့်ကိုကူညီပါ။ ငါ၏အမှု၌ငါသည်ကဒ် Rosgostraha ထုတ်ပေးကြပါပြီ ...
က Tver ၏မြို့ဟုခေါ်တွင်စေရန်အသုံးပြုသည့်အတိုင်း?
က Tver ၏မြို့ဟုခေါ်တွင်စေရန်အသုံးပြုသည့်အတိုင်း? Kalinin ငါ 1 Kalinin အတွက်လူတန်းစားမှသွားဘဲ, ဒီ Tver Tver ရှိရာ ... အဆိုပါပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးရုရှားနိုင်ငံ Tver (19311990 အတွက်နှစ်ပေါင်း Cali # 769 ;. Ning) မြို့ ...
အဘယ်မှာရှိအွန်လိုင်း CTP ဝယ်ဖို့? Rosgosstrakh လာထာဝရအကျင့်ကိုကျင့်ရှိပါတယ်ဖြစ်စေအလုပ်မလုပ်ပါဘူး RESO ထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။
အဘယ်မှာရှိအွန်လိုင်း CTP ဝယ်ဖို့? Rosgosstrakh လာထာဝရအကျင့်ကိုကျင့်ရှိပါတယ်ဖြစ်စေအလုပ်မလုပ်ပါဘူး RESO ထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။ XS CO ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဘဲနေရသနည်း vseh.chtoby ဘယ်သူမှမှာဒါ Tinkoff အာမခံနိုင် ...
မော်စကို, များစွာသောလေဆိပ်? အဘယ်သို့ကိုခေါ်သလဲ?
မော်စကို, များစွာသောလေဆိပ်? အဘယ်သို့ကိုခေါ်သလဲ? Vnukovo, Bykovo Sheremetyevo, Domodedovo 4- ။ Monino, Kubinka, Zhukovsky: ဇွန်လ 20 2016 နှစ်ပေါင်း nachnt အလုပ် Zhukovsky အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်စစ်တပ်၏တွေအများကြီးတွင်။ ထိုအ ...
ကအာမခံမပါဘဲစံချိန်အပေါ်ကားတစ်စီးထားရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော ထိုသို့တူးဖို့မ politsmeny ရှိမရှိ?
ကအာမခံမပါဘဲစံချိန်အပေါ်ကားတစ်စီးထားရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော ထိုသို့တူးဖို့မ politsmeny ရှိမရှိ? ရောဂါရှာဖွေကဒ်ရောင်းရန် (MOT) စစ်ဆေးခြင်းလိုင်းကျနော်တို့ထက်ပိုနှစ်နှစ်အားလုံးရုရှားနိုင်ငံကျော်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့် ...
ငါပိုင်ရှင်မရှိဘဲကားတစ်စီးပေါ်အာမခံထဲကယူနိုင်သလား? အဘယ်သူမျှမမရမ်းအာမခံ oformyat.Mozhno မပါဘဲသာရှေ့နေများ၏အာဏာအခြေခံပေါ်မှာကားတစ်စီးပိုင်ရှင်မရှိဘဲအားလုံးလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်။ အဘယ်သူမျှမပြဿနာ။ ဒါဟာအတွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ် ...
အဘယ်အရာကိုအခွင့်ထူးအခန်းထဲမှာ AAA စီးရီးပေးသည်? ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ? အလေးအနက်ထား ... ကျေးဇူးပြုပြီး .spasibo
အဘယ်အရာကိုအခွင့်ထူးအခန်းထဲမှာ AAA စီးရီးပေးသည်? ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ? Vyborg 20-30 အပိုင်းပိုင်း p အကြောင်းကိုလျှင်အလေးအနက်ထား ... ဘယ်မှာရှာနေ .spasibo ပေးပါ။ ငါမူကား AA ကိုအနီရောင်ယူ သာ. ကောင်း၏ *** Saveta တစ်ဦးကမယူပါဘူး ...
ကားများအတွက်ရှေ့နေချုပ်တစ်ဦးကို Power ကဘာလဲ? အဘယ်ညာဘက်ဒီစက်အပေါ်တစ်ဦးလူကိုရှိသနည်း
ကားများအတွက်ရှေ့နေချုပ်တစ်ဦးကို Power ကဘာလဲ? အဘယ်ညာဘက်ဒီစက်အပေါ်တစ်ဦးလူကိုရှိသနည်း အာမခံဝင်ခံရဖို့အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်ရှိပါ! တစ်ဦးအယူအဆအဖြစ်ရှေ့နေသို့မဟုတ် notarized ၏ယေဘုယျပါဝါ ...
ငါမတော်တဆမှုအတွက်လေ ... တရားရုံးတစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ချိုးဖောက်မှုအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူသည်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပေးဆောင်ကြမည်နည်း
ငါမတော်တဆမှုအတွက်လေ ... တရားရုံးတစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ချိုးဖောက်မှုအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူသည်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပေးဆောင်ကြမည်နည်း 50% အထိဘာသာရပ်ယာဉ်မောင်းများ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အမှားလည်းမရှိသည့်အခါမော်တော်ယာဉ်ပျက်စီးမှုမတော်တဆမှုငွေကြေးဆိုင်ရာလျော်ကြေးငွေဖြစ်ပွားခဲ့သည်စေ၏။ သောကြောင့် ...
တိုးချဲ့ထားသော CTP - ဒါဘာလဲ။
တိုးချဲ့ထားသော CTP - ဒါဘာလဲ။ အကယ်၍ မတော်တဆမှုသည်သင်၏အမှားဖြစ်ပြီးငွေပေးချေမှုအပေါ်ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန်ပါက 120t ထက်ကျော်လွန်ပါက။ r ထို့နောက်ခြားနားချက်ကိုပေးချေရန်အိတ်ဆောင်ထဲကမဟုတ်ပါ ဒါပေမယ့် extension ကိုမှ။ ငါအကြံပေးကောင်းတယ် ...
Ingosstrakh MTPL ငွေပေးချေမှုနားလည်
Ingosstrakh သည် CTP ငွေပေးချေမှုကိုလျှော့တွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေရရန်အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့၏အဆက်အသွယ်များကိုလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ခြင်းသည်အလွန်ကျေးဇူးတင်စရာအလုပ်ဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်၊ ငါအထပ်ထပ်ထပ်ခါတလဲလဲမပြောချင်တော့ဘူး။
MTPL အာမခံသို့ fit မှရှေ့နေတစ်ဦးရိုးရှင်းသောလက်-တိကျမ်းစာ၌လာသည်အာဏာ prompt နမူနာ
ကျွန်တော့်ကို CTP အာမခံနှင့်ကိုက်ညီရန်ရိုးရှင်းသောလက်ရေးမူဖြင့်သာယုံကြည်ရသောနမူနာကိုပြောပြပါ။ အာမခံနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်တွင်မည်သည့်ရှေ့နေမှမလိုအပ်ပါ။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရေးပါလိမ့်မယ် ငါ Yandex ဆီကိုသွားပြီး "ရိုးရှင်းတဲ့လက်ရေးစာတစ်နမူနာကိုရေးသားခဲ့သည်။ "
ဘယ်ဟာသင်ကားတစ်စီးပေါ်အာမခံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ငါကလူသွားလူဖြစ် သာ. ကောင်း၏လို့ပြောချင်းစီမှတ်တိုင်ယာဉ်ထိန်းရဲမှာ 800r ခဲ့ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်) သင်ဒရိုင်ဘာနေမကောင်းလူတွေ။ တီဗီမြေအောက်ရထားမိန်းကလေးများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရနိုင်တယ် ... kntgutdremat ဖတ်ပါ
DGO မူဝါဒဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။ DGO သည် CTP အတွက်တာ ၀ န်ယူမှုကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အမှားကြောင့် 140 တစ်ထောင်မှငွေပေးချေမှုကိုတိုးချဲ့လိုပါက ...
အဘယ်သူသည်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတစ်ခုလွတ်လပ်သောစာမေးပွဲလုပ်? လောလောဆယ်ဒီအဘယ်သူမျှမပြဿနာပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတရားရုံးများတွင်သားကောင်များ၏ဘေးထွက်အပေါ်ဖြစ်ကြပြီးအာမခံ, ပြစ်ဒဏ်များနှင့်အခြားကောင်းတဲ့အမှုအရာများ underpayment recover လုပ်ဖို့ ... ။
လူ့အာမခံအတွက်ဘယ်လောက်ရေးထိုးသလဲ? ဒါဟာအချိန်ပေါ်ဒါပေမယ့်လည်းမြင်းကောင်ရေအပေါ်သာမူတည်လျက်, ယာဉ်မောင်းကိုလည်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအချက်များရှိလျှင်မှတ်ပုံတင်, ယူရှိသည်ပါဘူး ...
သင် PTSD အတွက်ဝယ်ယူ-ရောင်းချဆိုင်းဘုတ်များအပေါ်တစ်ဦးစာချုပ်ရေးရန်ကားတစ်စီးရောင်းနေလျှင်ဘာလုပ်ရန်,
သင်ရောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်သင်မှတ်အတွက်ဝယ်ယူ-ရောင်းချဆိုင်းဘုတ်များအပေါ်တစ်ဦးစာချုပ်ရေးရန်ကားတစ်စီးရောင်းနေလျှင်ဘာလုပ်ရန်။ 1 ။ 3-မိတ္တူသင်တဦးတည်းရောင်းချမော်တော်ယာဉ်များ၏စာချုပ် Sign, နှင့်ဝယ်နှစ် ... ။
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,332 စက္ကန့်ကျော် Generate ။